Inyanga yee-yee-pa parlour lo msebenzi (sokubuyisa ixesha ekuphulukenwe okanye open-life)
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Inyanga yee-yee-pa parlour lo msebenzi (sokubuyisa ixesha ekuphulukenwe okanye open-life)
※ ukuba lahlala intsingiselo yeshishini yonke abo
pa Favorite Nceda ujonge na, ukuze sibe abantu obaziyo, ukukhuphisana, elibe pa na phakathi enyangeni kuyacetyiswa kakhulu . Kwi pa lokuphumula, kodwa aninako into isiganeko ngoku, ukuba ifaniswa siganeko, kufuneka kubekho iivenkile ezininzi ukuba akhuphe intlawulo elikhulu, ezifana umcimbi uphawu. E
, kuya kuba kutheni ixesha lokukhupha imali enjalo, ethetha ukuba alise phakathi, inxaxheba kwisicwangciso ezininzi zoshishino. Isicwangciso soshishino kwi elibe pa kukuthi, uhlengahlengiso yesiqhelo isikhonkwane kunye nezicwangciso ngenyanga yokuqala, ngoko siza kuqalisa. Ngeli xesha, enoba phakathi kancinane, kugcina imali kangangoko unako kugubungela intsilelo.
ukuba, njengokuba kakhulu ngaphandle kokusilela, kwakhona kuza ixesha elaneleyo ukuze abuye kwisiqingatha sesibini ukuba phakathi. Ngoko ke, njengokuba icala pa parlour, umdlalo, ezifana kukhutshwe intlawulo enkulu embi ukuba ishishini kakuhle kakhulu lula ukuba embindini. Hi, le nto uza ubungakanani ngqo kwishishini, kodwa kwakhona ekuqaleni kwenyanga ngokuxhomekeke inxalenye, ukuba iphumelele ekujoliswe ngenyanga yokuqala, ukuba babakhuphe njalo. Ekubeni
imini kuba nje ke ukuba yonke Itheyibhile umba hlengahlengiso, ngelo xesha engqondweni, zama ukuba bagcine ngcono mindzulamiso. uhlengahlengiso Nail ngexesha lomsitho, ngokuqhelekileyo kuhlengahlengiswa luya kusekelwa. Masithi ke ukuba imiselwe ku-12.5 mm isikhonkwane eqhelekileyo ekuqaleni. Xa iivenkile ezinjalo, ukuba kukho athanda ukumnika, ukuya 13 mm uya kuza ivuliwe. Ukuthetha
isantya ojikeleza ngaso, isantya ojikeleza ngaso lomzuzu omnye, 0. I iyahluka kanye kumaxesha-5. Mere umehluko, kodwa ke ukuba akunjalo, isolo nganye ngokuba akukho ukufika, ndiya ingahluka kakhulu sijonga imali iyonke zotyalo-mali. Yima ngaphaya oku umda umgca kwakhona, ukuba uphume ndim kuthetha ukuba phakathi enyangeni. Emva koko, phakathi kwihlabathi yangaphambili yomvuzo wakho, 's ixesha elizayo kwakhona ngaphandle ezininzi abo bacinga ukuba ufuna ukuphumelela. Ukuba ivenkile usebenzisa iseti
Horukon, Kakade ke, ukuze sibe iseti enencasa of Horukon.
pa parlour lwesicwangciso soshishino, nayo iye inxaxheba iimeko esifubeni enkulu wonke enjalo. Kwaye ezinjalo, uninzi amehlo Injongo eliphakathi apho ufuna kwakhona ukukhumbula ukuba asinto nje. Ngosuku lo mcimbi kwekhosi ajolise amehlo, kodwa ngokukodwa kwimeko ukuba mcimbi engento, ngoko ke, emva kweentsuku ezimbalwa amehlo Injongo engaphezulu.
Isizathu Ilula kakhulu, ukwenzela ukuba ufuna ukubeka kunye nomfanekiso ukuba lifikile ngaphandle kubaxumi kwisiqingatha sesibini enyangeni leyo, ngenxa yokuba kukho imfuneko yokuba phandle apha. Zendai njengokuba akunakwenzeka, ezifana imodeli ibhilibhodi, nina iinzipho kunye nezicwangciso zikwimizekelo emininzi iintsuku ezimbalwa senziwa. Xa kuthe ngomhla olandelayo, njalo njalo, kwaye imifuziselo enjalo, imifuziselo ukuba sizabalazela Ngenxa eliphezulu kungenzeka, ndithi ukuba kulula-to-ukuqonda kakuhle Injongo amehlo.
e nesendlu pa eya udlale uzifunda, ngale ndlela thina ishishini ingqalelo ukuhamba inyanga. Ukulwa ngobulumko apho inzuzo le Enyanisweni, ukuba kubalulekile ukuba siya kumisela yindlela yokuphumelela. Oko kukuthi umfanekiso ukuze afune ukuba kunye, ngenxa yokuba kukho imfuneko yokuba phandle apha. Zendai njengokuba akunakwenzeka, ezifana imodeli ibhilibhodi, nina iinzipho kunye nezicwangciso zikwimizekelo emininzi iintsuku ezimbalwa senziwa. Xa kuthe ngomhla olandelayo, njalo njalo, kwaye imifuziselo enjalo, imifuziselo ukuba sizabalazela Ngenxa eliphezulu kungenzeka, ndithi ukuba kulula-to-ukuqonda kakuhle Injongo amehlo.
e nesendlu pa eya udlale uzifunda, ngale ndlela thina ishishini ingqalelo ukuhamba inyanga. Ukulwa ngobulumko apho inzuzo le Enyanisweni, ukuba kubalulekile ukuba siya kumisela yindlela yokuphumelela.